Ra’iisul wasaare Kheyre oo ka hadlay khilaafka xildhibaanada baarlaamaanka iyo xukuumadiisa – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo ka hadlay khilaafka xildhibaanada baarlaamaanka iyo xukuumadiisa
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa markii ugu horeeysay ka hadlay khilaaf la sheegay inuu ka dhex taagan yahay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda uu isaga hoggaaminaayo.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo hadal kooban ka jeediyay kullan maalintii shalay ay golaha wasiiradda Soomaaliya ku yeesheen magaalada Kismaayo, ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararkaasi ku saabsan in xukuumadiisa uu khilaaf kala dhaxeeyo baarlamaanka Soomaaliya.
“Xilligaan la joogo ma jiro wax khilaaf ah oo u dhaxeeya hay’addaha dowladda, waxaan joognaa waqtigii ugu wanaagsanaa ee wada-shaqeynta baarlamaanka iyo xukuumadda, wararkaasi waa wax ay baahiyeen dad danno gaar ah wata” Sidaasi waxaa yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in xukuumadiisa ay ku timid rabitaanka baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana ay leeyihiin wadashaqeyn buuxda oo dhinac waliba leh.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii guddiga joogtada ah ee baarlamaanka Soomaaliya ay u yeereen ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, iyagoo kadib su’aalo ka weydiiyay hadalo xiisad abuuray oo kasoo yeeray dad taageersan xukuumadda uu isga hoggaaminaayo.